पशु मार्न त छुट छैन भने मान्छे मार्न छुट कहाँ छ ? « Sansar News
पशु मार्न त छुट छैन भने मान्छे मार्न छुट कहाँ छ ?
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:२२
इतिहासका पानाहरुमा जीवित रहेको कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व जस्तै विधम्सकारी हत्याकाण्ड हो, यो नवराज विक काण्ड । तर यो हत्याकाण्डले चेतनशील प्राणी मानवमाथि रेख लगाएको छ । आज लाजमर्दो बनाएको छ, उक्त घटनाले हामी उत्कृष्ट प्राणी मानव हौं भन्न । हामी चुकेका रहेछौं । हाम्रो संस्कार रीतिरिवाजले मानवताको पाठ सिकाउँछ । तर आज कसरी मेटियो, मान्छेभित्रको मानवता, दया र सदभाव ? कसरी बन्न गयो मानव बस्ती विधम्सकारी ?
श्रीहरि विष्णुद्धारा जब सृष्टिको शुरुवात भयो । ब्रह्मा र शिवको उत्पत्तिसँगै उनले सम्पूर्ण प्राणी जगतको सृष्टि गरे । जब मानवको सृष्टि गर्ने पालो आयो उनले केवल स्त्री र पुरुषमात्र सृष्टि गरी पृथ्वीलोकमा पठाए । यो कुरा विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । श्रीहरि विष्णुको मुखार बिन्दुबाट ‘ॐ’ शब्द सहितचार वेदको उत्पत्ति भएको कुरा विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । ती चार वेदमा जात उल्लेख गरिएको पाइदैन । भगवानले सृष्टिको संरचनामाजातजाति र वर्ण भेद बनाएनन् । कालान्तरमा पेशा, वर्ण र क्षमताका आधारमा विभिन्न जातमा मानिसलाई वर्गीकरण गरियो । नेपालमा यो चलन जयस्थिति मल्लका पालामा भएको हो । राजा जयस्थिति मल्लले क्षमता, योग्यता र दक्षताका आधारमा चार जात छत्तीस वर्णमा नेपाललाई विभाजित गरेको कुरा इतिहासका पानाहरुमा जीवितै छ ।
यहाँ नवराज विकको हत्याको जातीयविभेद र मानवीय अपराधको पराकाष्ठलाई लिन सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हाम्रो समाजको ज्ञान, वुद्धिको स्तर र औकात दर्शाउँछ उक्त घटनाले । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकको उपधारा १ मा “कुनै पनि ब्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जातजाती, समुदाय, पेशा ब्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिने छैन” भनेर उल्लेख गरिएको भएता पनि यस्तो विधम्सकारी घटनाले त्यो गाउँका मान्छेले संविधानको ‘स’ पनि नपढेको आभास दिलाउँछ ।
त्यो उमेर नै त्यस्तै हुन्छ । त्यस उमेरको प्रेम नै त्यस्तै हुन्छ । होशहवास हराउने खालको । तर उमेर पुगेका गाउँले र किशोरीका अविभावकले बुझ्नु पर्ने थियो । आफ्नी छोरीलाई सम्झाउने, बुझाउने र तह लगाउन सक्थे । अर्काको संन्तानलाई मार्न पाउने अधिकार कुन जात ? धर्म र कानूनमा छुट छ ? अल्लारे केटाको गल्ति थियो भने पनि दुई चार झापड लगाएर घर पठाउन सकिन्थ्यो । प्रहरीलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । दम्काउन सकिन्थ्यो । केहीवर्षको समय तोकेर कुर्न लगाउन सकिन्थ्यो । यति धेरै उपायहरु हुँदाहुँदै लघारेर, कुटीकुटी मान्छेको जमात उर्लेर मार्नु कति सम्मको अपराध हो ? कतिसम्म निर्दयिताको प्रमाण हो ? यसरी पशु मार्न त छुट छैन । मान्छे मार्न कहाँ छुट छ ?
रुकुम हत्याकाण्डले मानव जातीकै बर्बरतामाथि औंला उठाएको छ । मान्छे यति निर्दयी कसरी बन्न सक्छ ? जंगली जनावर भन्दा पनि गएगुज्रेको स्थानमा रहेछ मान्छेको नरसंहार विधम्स । संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव हो । सोचबिचार गर्न सक्ने । सहि गलत परख गर्न सक्ने क्षमता भएकोले नै मानव अरु सम्पूर्ण प्राणीभन्दा उच्चकोटीमा गनिन्छ । हाम्रा इतिहासका पानाहरुमा जीवित रहेको कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व जस्तै विधम्सकारी हत्याकाण्ड हो, यो नवराज विक काण्ड । तर यो हत्याकाण्डले चेतनशील प्राणी मानवमाथि रेख लगाएको छ । आज लाजमर्दो बनाएको छ, उक्त घटनाले हामी उत्कृष्ट प्राणी मानव हौं भन्न । हामी चुकेका रहेछौं । हाम्रो संस्कार रीतिरिवाजले मानवताको पाठ सिकाउँछ । तर आज कसरी मेटियो, मान्छेभित्रको मानवता, दया र सदभाव ? कसरी बन्न गयो मानव बस्ती विधम्सकारी ?
नेपालको भूमिमा जन्म लिएका गौतम बुद्धले प्रत्येक मानवले ‘अहिंसाको मार्ग अपनाउनु पर्ने’ बताएका थिए । बुद्धको भूमिमा यही हो चेतनाको स्तर ? मानवता र दयाको स्तर ? सोंच र विचारको स्तर ? गाउँलेको जमात उर्लेर नरसंहार हत्या गरिनुले समाजको रुढिवादिताको चरम निर्दयी सोंचको पर्दाफास गरेको छ उक्त घटनाले । नेपालको पश्चिमी भेगमा जातीय विभेद, लैंगिक विभेद, छौपडी प्रथा आदि कारणले धेरैले ज्यान गुमाएका घटनाहरु हाम्रो सामु थुप्रै छन् । यस्ता खाले घटनाले मानिसको सोंच र विवेकको स्तरलाई दर्शाउँछ । के अहिले पनि हामी ढुङ्गे युगमै छौं त ? के अहिले पनि हाम्रो औकात ढुङ्गामा ढुङगा रगडेर आगो निकाल्ने मात्र छ त ? के अहिले पनि हाम्रो औकात भ्याकुर खाएर ओडारमा बस्ने छ त ? केही मान्छेको नरसंहारको कारणले यस्तै देखायो हामीले हासिल गरेको शिक्षा र समझदारीको पाटो । सोंच र विचारको पाटो ।
एक्काइस वर्षीय नवराजविक र सत्र वर्षीया शुष्मा बिच करीब तीनवर्षदेखि माया प्रेम रहेछ । उक्त किशोरी पटकपटक विकको घरमा आएको र तीनचार दिनसम्म बसेको कुरा नवराजकी आमाले बताएकी छन् । उक्त किशोरीले आफूलाई बाआमाले अन्तै विहे गर्दिन लागेकोले अलि धेरै साथीहरु लिएर आफूलाई लिन आउन नवराजलाई फोन मार्फत जानकारी गराएकी रहिछन् । शुष्माले बेलुका पाँच बजेपछि मात्र आउनु भनेकी हुनाले । त्यो उमेरको अल्लारे केटो आफ्नी प्रेमिकाले त्यसो भनिरहँदा घरमा मन बाँधेर बस्न सक्ला ? नवराज र उनका साथीहरु बाटोमा बस्दैबस्दै पाँचबजे त्यस गाँउमा पुगेछन् । त्यो उमेर नै त्यस्तै हुन्छ । त्यस उमेरको प्रेम नै त्यस्तै हुन्छ । होशहवास हराउने खालको । तर उमेर पुगेका गाउँले र किशोरीका अविभावकले बुझ्नु पर्ने थियो । आफ्नी छोरीलाई सम्झाउने, बुझाउने र तह लगाउन सक्थे । अर्काको संन्तानलाई मार्न पाउने अधिकार कुन जात ? धर्म र कानूनमा छुट छ ? अल्लारे केटाको गल्ति थियो भने पनि दुई चार झापड लगाएर घर पठाउन सकिन्थ्यो । प्रहरीलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । दम्काउन सकिन्थ्यो । केहीवर्षको समय तोकेर कुर्न लगाउन सकिन्थ्यो । यति धेरै उपायहरु हुँदाहुँदै लघारेर, कुटीकुटी मान्छेको जमात उर्लेर मार्नु कति सम्मको अपराध हो ? कतिसम्म निर्दयिताको प्रमाण हो ? यसरी पशु मार्न त छुट छैन । मान्छे मार्न कहाँ छुट छ ?
ती अभागी आमा जसले नौ महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर हुर्काएको संन्तानको बर्बरतापूर्ण तरिकाले मारिदा । आँखाबाट रगतका सहस्र बलिन्धारा आँशु बगिरहँदा कुन चाहीँ मानिसको मनलाई नपगाल्ला ? कुन चाही आमाको मातृत्वले नसराप्ला ? ती अपराधीहरुलाई । कुन चाही जात संस्कृति र धर्मले स्वीकार्ला ? ती अपराधीहरुलाई । आमाको कोख उजाड्ने अधिकार कुनजात र धर्ममा कैद गरिएको छ ? मानवताभन्दा ठूलो कुनै जात छ संसारमा ? दया र प्रेमभन्दा ठूलो कुन धर्मशास्त्र छ संसारमा ? मान्छे मार्न कुन ठाउँमा छुट छ ? हाँगा जतिभए पनि संसारको एउटै मात्र धर्म छ, त्यो हो मानवता । मानवता भन्दा पर अर्को कुनै धर्म र जात हुन सक्छ ?
समाजमा हुने विविध यस्तै घटनाले जातीय विभेद, लैङिक विभेद, छौपडी प्रथाले भित्रैदेखि जरो गाडेको प्रमाण यस्तै निन्दनीय घटनाहरुले बेलाबखतमा प्रस्टाउँछन् । यस्ता घटनाहरु घट्नुको पछाडि घटिया सोंच र घटिया औकात मान्छे भित्र हाभी हुनु नै हो । घमण्डले मान्छे अनमत्त हुनु हो । जातका ठेकेदारहरुले यो कुरा प्रष्ट्याउन संसारका ठूलाठूला वैज्ञानिकहरु र आविष्कारकहरुको जात के थियो ? संसारका प्रसिद्ध ग्रन्थहरुका रचयिता र दार्शनिकहरुको जात के थियो ? उक्त घटनाले कथित दुष्ट मान्छे भित्र दबिएर रहेको क्रुर मानसिकता ओकलेको छ ।
नवराज विकहरुको हत्याकाण्डको जति भत्सना गरे पनि कमि नै हुन्छ । यस्ता घटनाहरुको निन्दा गर्न पनि शब्दहरु भेटिदैनन् शब्दावलीमा । जति धिक्कारे पनि कमै ठान्छ, सम्पूर्ण आमाहरुका आत्माले ती अपराधीहरुलाई । जसले आज आमाहरुको कोख रित्तो बनाइदिएका छन् । आमाहरुको मातृत्व खरानी बनाएर उडाएका छन् । आमाहरुको संन्तानको माया सिर्फ धुँवा बनाईदिएका छन् । आमाको कोख उजाड बनाउने यस्ता अपराधीहरुलाई छानविन गरेर कडाभन्दा कडा कारवाही होस् । हार्दिक समवेदना ती सम्पुर्ण नवराजहरुलाई । जसले जंगली जनावरभन्दा पनि गएगुज्रेको मानसिकता प्रस्तुत गरेर तड्पाएर मारे । ती अपराधीहरुलाई मान्छेले क्षमा गरे पनि त्यो रगत सिञ्चित भएको धर्ती र समयले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।